handy cafe offline activate လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလေး - MYSTERY ZILLION
handy cafe offline activate လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလေး
ဒီလိုပါ ..ကျွန်တော်အသိ ဂိမ်းဆိုင်တခုကို ကျွန်တော် handy cafe တင်ပေးထားပါတယ် ....အွန်လိုင်းနဲ့လဲ ရီဂျစ်စတာလုပ်ထားပါတယ် ...ဒါပေမယ့်တပါတ်လောက်ပဲ ကြာပါတယ် demo version ပဲပြန်ဖြစ် သွားလို့
sever မှာမို့လို့ defreeze လဲ အုပ်လို့မရနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးများရှိရင် ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ
cafezee သုံးချင်ပေမယ့် ၁၀ လုံးနဲ့အထက်မရလို့ handy ပြောင်းသု့းကြည့်တာပါခင်ဗျာ
ဖိုရမ် ထဲမှာ ရှာတာ တွေ့ပေမယ့် offline activate လုပ်တာအဆင်မပြေလို့ ဒီမှာမေးလိုက်ရတာပါ .......
ရသွားပါပြီဗျာ..............registry ကိုဝင်ကလိတော့မှပဲ ရတော့တယ်.......စဉ်းစားပေးကြလို့ကျေးဇူးနော်
Internet Explorer ကို ရိုး ရိုး setting ထားပါ It is okay
How to do it ? Can you share to us?
how to do this >>>>>>>>>>
please tell me more at [email protected]
ဒီလိုပါ..registry မှာ key အသစ်တွေ ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တာပါ
ကျွန်တော်သုံးတာက Version 3.3.21 ပါ
ကျွန်တော် သုံးထားတဲ့ reg နှစ်ဖိုင် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်
handy ကိုတော့ပိတ်ထားပြီးမှ run ပါ
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ခုလိုပြန်လည်​​ေ မျှတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ​
run pay yone pl lr ako! plz?